Wedzera Email CTRs neSocial Sharing | Martech Zone
Wedzera Email CTRs neSocial Kugovana
Muvhuro, October 28, 2013 Douglas Karr
GetResponse yaisa pamwe infographic pane iyo yakazara mhedzisiro yekudyidzana kugovana paemail tinya-kuburikidza nemitengo… uye mhedzisiro yacho inoshamisa.
Huwandu hwevashandisi vanosanganisira mabhatani ekugovana munharaunda mumaemail avo yakawedzera kubva pa18.3% kusvika pa29.4%. Kuenzaniswa nemhedzisiro yegore rapfuura, ndiko kuwedzera kwe61%. Zvinotonyanya kushamisa ndezvakanaka zvepamusoro mhedzisiro mhedzisiro yetsamba dzaisanganisira mabhatani ekugovana munharaunda. Iwo maemail aive ne avhareji tinya-kubudikidza-chiyero (CTR) 158% yakakwira pane maemail ayo aisanganisira kugovana munharaunda.
Wona infographic pazasi uye dhawunirodha mushumo wese kubva GetResponse.
Tags: tinya-kuburikidza chiyerotinya-thru chiyeroctreemail ctrEmail Marketingemail zvemagariromabhatani emagariroSocial Media Marketingsocial sharing
Wepamusoro Mabhenefiti eSocial Media Kushambadzira